7 Arimood oo dumarka ay Raga ku nacaan -Sirta Nolosha – Somali News
7 Arimood oo dumarka ay Raga ku nacaan -Sirta Nolosha
January 28, 2018 suldaan ARIMAHA BULSHADA 0
Waxaa Halkaan idinkugu soo gudbineynaa Todobo arimood oo Dunida ugub ku ah Gaar ahaan Wadamada Islaamka balse mudooyinkan dambe lagu arkay Dhalinyaro badan, waxaana la Sheegay in Todobadaas arimood raga Marka ay ku arkaan Dumarka in ay keento in ay Nacaan niyadana ka saartaan. Todobadaas Arimood ayaana ka ah
:- 1-LUGAHIISA: nimanka Qaar waxay leyihiin muruqyo aad u waaweyn laakiin qaarka kore ee jirkooda iyo lugihiisa inaysan islaheyn oo waxay sameeyen leylis ay ku dhisiyaan gacmahooda oo kaliya ayagoo ihmaalinaya jirka intiisa hoose ,marka Haweenku sahal ayay u arkayaan arintaas waxayna la noqotaa arin la yaab leh laakiin waa iska caadi marka loo eego qaar ka mid ah nimanka.
2-CIJIYIHIISA: waxaa arin layaab leh ah inuu ninku daysto cijiyaha hadii uusan ahayn nimanka garaaca gitaarka ama qalabka musiga…cijiha oo la deysto waa arin u gaaar ah dumarka .. waxaa foolxuma ah raga in lagu arko cijiyo dheer dheer.
3-HAB DHAQANKIISA: naagtu waxay jeceshahay ninka albaabka gaariga ka furo iyo uu dhiibo lacagta ayadoon ka dalban si wanaagsana ola dhaqma ehelkeeda iyo asxaabteeda, laakiin waxaa jira dhaqamo aan habooneyn sida inuu cuntada ka hor bilaabo dadka kale oo dhan taas oo ah arin layaab leh ,marka gabadhu waa inay arintaas kormeertaa.
4-KA BADBADINTIISA… Haweeneydu waxay jeceshahay ninku markuu amaanayo inay dhageysto laakiin kusoo celcelintiisa isla amaantii dhowr jeer naaguhu ma jeclo.
5- TILMAAMAHA WAJIGA… waxa ugu horeeyo oo gabadhu ninka ka fiiriso waa wajiga gaar ahaan indhaha marka naagtu waxay ka dareemi kartaa tilmaamaha wajiga inuu run sheegayo ama been sheegayo .
6- WAXYAABAHA LA ISKU QURXIYO. raggu ma qaataan dahabka sida naagaha oo kale marka waxaa arin la yaab leh ah inay naagtu ku aragto tusaale ahaan gacanta ninka jijimo dahab ah, faraanti dahab ah , saacad qaal ah taasi waxay noqoneysaa arin ka badbadis ah .
7- KABIHIISA .. Haweenku waxyaalaha yar yar fiiriya waxay fiiriyaan mararka qaar kabaha ninku wato.. si ay u eegto inay ku haboonyihiin dharka uu wato.. sababto ah kabo ka duwan guud ahaan midabka dharka u uwato waa arin layaab leh gabadh kasto aragtideeda gaar ah ee ninka, waxaa laga yaabaa arimahaas layaab leh oo dhan inay naagtu ku jeclaato ninka laakiin waa arimo aan si naba caadi aheyn
Arimaha Qoyska:Sidee U Raali Gilineysaa Gacalisadaada Ama Gacaliyahaaga Oo Ka Xanaaqsan , Farsamooyinkaan Raac.